San-Xaskule: Beesha MaalinGuur oo Cabdi ka Codsatay Ceelal iyo Ciyaalka – Rasaasa News
Jijiga, May 01, 2014 – Shirkii labada maalmood uga socday tuulada San-xaskule, ee xadka Jarar iyo Nogob madaxwaynaha degaanka iyo beesha Maalinguur ayaa iska gababgaboobay.
Shirka oo macnihiisu ahaa sidii ay beesha maalinguur uga hadhi lahayd halganka gobonimo doonka iyo ururka ONLF, kaas oo ololihiisa uu waday Axmed Yusuf Habane, oo ah ku simaha Ugaaska beesha.
Abla Abalynta Ugaas aan jirin waxay ka mid yihiin arimaha degaanka, Ugaaska dhabta ah ee Beesha Maalinguur waa Ugaas Cabdixakiin Ugaas Aadan Xadiis, oo degan dalka Marykanka, wuxuuna aaminsan yahay xoriyada Ogadenia.
Dadka shirka ka qaybgalay ayaa dhamaantood ahaa odayaal iyo dad reer miyi ah oo laga soo uruuriyey lafaha beesha. Dadka dibada ka yimid ee ka qaybgalay shirku aad bay u koobnaayeen sida uu noo soo gudbiyey wariyaha noola socda shirka San-xaskule.
Dhalinyaro laga qaaday xabsiga Jijiga oo hore uga tirsanaan jiray ONLF, ayaa iyaguna ka hadlay shirka.
Madaxwaynaha oo ka hadlay shirka ayaa shardi ku xidhay horumarin laga sameeyo degaanada beesha, isaga oo yidhi “hadaad nabadiidka iska sifaysan dawladu waxbay idiin qaban.”
Ugu dambayntii odayaasha beesha ayaa madaxwaynaha ka codsaday in ceelal loo qodo beesha, ciyaalka xidhana loo siidaayo. Madaxwaynuhu ma siin wax jawaab odayaasha, laakiin lama saadaalin karo in la hirgalin iyo in kale codsiga odayaasha.
Madaxwayne Cabdi ayaa hore meel fagaare ah uga sheegay in aan waligood la siidayn doonin dadka xidhan ee waxyeelada hore ugu gaystay ciidanka Federalka. Madaxwayne Cabdi wuxuu yidhi “caruur badan oo ciidanka federalku dhalay ayaa Aabo la,aan ah.”
Siyaasiga rug cadaaga ah ee Mahdi Ayuub oo shirka fadhiyey, ayaa hore dawlada Atoobiya uga diiday in ay shacabku dagaal la galaan ONLF. Mahdi ayaa saraakiisha Atoobiya u sheegay in ay qoraan ciidan mushaar qaata, arintaas oo uu ku waayey hogaanka nabadgaliyada, oo Cabdi Iley lagu badalay.
Horumarka ay shacabku xaqa ugu leeyihiin Atoobiya, in ku xidho dagaal ay la shacabku la galaan ONLF iyo wiilashooda, waa wax lalayaabo oo gumaysiga lagu yaqaan.